Nagu saabsan - Fujian Uniland Foods Co., Ltd.
Fujian Uniland Foods Co., Ltd. Waxay ku taal koonfur-bari ee Fujian, galbeedka galbeedka Taiwan, oo ku habboon safarka adduunka iyada oo loo sii maro dekedda Xiamen.
Iyadoo in ka badan 20 sano oo khibrad ah safka Khudaarta IQF & miraha la warshadeeyo.
Waxaan sii wadaynaa dadaallada sanadba sanadka ka dambeeya si aan ula kulanno macaamiisheenna noocyo kala duwan oo ah khudaar & miro tayo sare leh oo u hoggaansamaya GAP, HACCP, xeerarka ISO, iyo shahaadooyinka BRC, FDA, KOSHER, HALA.
Uniland waxay nafteeda u hurtay inay hogaamiye noqoto processor iyo dhoofisa
Waqtigan xaadirka ah, waxaan leenahay aqoon isweydaarsiyo 3000 mitir murabac ah, oo ay ku jiraan laba xariiq oo wax lagu farsameeyo & qaboojiyaha, mid kasta oo qabta 6 tan / saacaddii. Ilaa hadda, awoodda wax soo saarku waa in ka badan 20 kun oo tan sanadkii.
2 X 100 mitir murabac oo loogu talagalay qolalka wax lagu rakibo.
3 X 500 mitir murabac oo seminaaro horay loo sii shaqeeyo.
In ka badan 1000 mitir laba jibbaaran 8 bakhaarro qaboojiye horay u sii jiray.
5000 tan oo qabow ah.
Sidoo kale, waxaan u samaynay aqoon-isweydaarsi cusub oo loogu talagalay khudradda FD & miraha awood u leh 4 x 220 mitir murabac oo qaboojiyayaal ah. Waxay noo keeni doontaa noocyo badan oo ah alaabooyin caafimaad macaamiisheenna.
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan soo saarnay waa: bambooyin safar / xaleef, fiiq-fiiqyo fangas madow, goos gooska digirta cagaaran, bean-soy beedka cagaaran (edamame) kernels / qolof, cobs macaan macaan / kernels, karootada / dice, taro cubes / dices, dices baradho, biyo xabadka xabadaha / xabadaha, ubaxyada ubaxyada, broccoli flore, bikaha beroolka ah, digaha cananaaska, digaalka cambe, mooska la gooyo, iwm.
Ku raaxeysiga hamigeenna wada shaqeynta si aan ugu shaqeyno warshadda iyo ganacsiga, waxaan had iyo jeer ilaalinaa sida ugu fiican ee aan ugu fidino alaab tayo sare leh qiime tartan u ah macaamiisheenna oo ka imanaya gudaha iyo dibedda. Waxaan sii wadi doonnaa inaan dhisno xiriir ganacsi oo faa'iido wada leh muddada-dheer dhammaan macaamiisheena ka kala yimid adduunka.